Daawo: Tartamayaasha doorashada CAR - BBC Somali
Daawo: Tartamayaasha doorashada CAR
23 Disembar 2015
Codbixiyayaasha CAR ayaa goobaha codbixinta u dareeraya 27 December, si ay u doortaan madaxwayne iyo baarlamaan si dib loogu soo celiyo maamul lagu doorto oo talada dalka qabta.
Isbahaysi Muslimiin ah oo la yiraahdo Seleka ayaa xukunka xoog ku qabsaday bishii Maarso 2013. Koox maleeshiyo masiixiyiin ah oo la yiraahdo anti-Balaka, ayaa ku kacay oo la dagaalamay, taasoo keentay in dalku galo rabshado isir ku salaysan.
Dowlad ku meelgaar ah oo la sameeyo bishii Jannaayo 2014, iyadoo doorashooyinka dib loo dhigay afar jeer tan iyo bishii February 2015, sababo la xiriir ammaan xumo iyo loolan dhinaca tas-hiilaadka ah, inkastoo ay dalka joogaan nabad ilaaliyayaal caalami ah.
Qaybta warqabadka ee BBC ayaa eegaysa cidda ku loolamaysa doorashada madaxtinimada iyo sida dagaalka ka sii dhexjira kooxaha hubasan uu u saamayn doono doorashada.
Warbixinada qaybta warqabadka ee BBC, ayaa ka diyaarisay faallooyinka wararka ee telefishin iyo raadiyaha iyo warbaahinta wax daabacda ee dunida oo dhan. Waxaad nagala socon kartaa @BBCSomali, BBCSomali Facebook, BBCSomali Instagram
Muuqaal Suuqa Bakaaraha oo xiran
Muuqaal Taariikh nololeedka Zuma oo kooban
Taariikh nololeedka Zuma oo kooban
Muuqaal '27 sano ka hor ayay jaamacaddu i aqbashay, balse hadda ayaan billaabay'
'27 sano ka hor ayay jaamacaddu i aqbashay, balse hadda ayaan billaabay'
Muuqaal Daawo: Sida uu Trump u niyad jebiyay qaar ka mid ah qaxootiga Dhadhaab
Daawo: Sida uu Trump u niyad jebiyay qaar ka mid ah qaxootiga Dhadhaab
Muuqaal Akshay Kumar oo u mahadceliyay taageerayaashiisa Soomaalida ah
Akshay Kumar oo u mahadceliyay taageerayaashiisa Soomaalida ah
Muuqaal Daawo: Reer Ilmahooda silcin jiray oo la maxkamadeeyey
Daawo: Reer Ilmahooda silcin jiray oo la maxkamadeeyey